ပုရိသတွေ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်သွားအောင် မိမိုက်လွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ ခေးကြီးလု – Real Link
ပုရိသတွေ မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်သွားအောင် မိမိုက်လွန်းတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ ခေးကြီးလု
By Cele PhyoPosted on April 23, 2021
မော်ဒယ် လုလုအောင် ဟာ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ်တော်လေး လို့ ပြောရတဲ့ သူမ ကတော့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ တင်ပေး လေ့ရှိပါ တယ်..။ သူမ ကတော့ ယခု မှာ ပုရိသ တွေ အသည်းယား လောက်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိလွန်း တဲ့ အလှတ ရား နဲ့ အထာကျကျ လေး ဓာတ်ဖမ်း နေခဲ့ ပါ တယ်..။ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ဟာ လွမ်းနေတဲ့ ပရိသတ် တွေ ကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။
အောင်မြင် တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက် အဖြစ် အနုပညာ လောက မှာ ရပ်တည် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် လုလုအောင် ကတော့ ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထား နိုင် ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ တရား ကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး တွေ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး တွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိပြီး ပြည်သူချစ် အနု ပညာရှင် တစ်ယောက်ဆို ရင်လည်း မမှားပါ ဘူး..။
သူမ ကတော့ ” ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ ပြင်ဆင် ထားရင်… ကျေနပ်မှာ ဘဲ ပြည့်စုံ ခန့်ညားတဲ့ အမျိုးသား အမျိုးသမီး နဲ့ လက်ထပ် ခွင့် ရရင် အရမ်းပျော်ရွှင် မှာဘဲ…. အဲဒီလိုတာ ဖြစ်မယ်ဆို ကိုးရီးယား က ဆူဆိုက် လုပ်တာနဲ့ ကွာရှင်းမူ အများဆုံး ဘာလို့ ဖြစ်မလဲ နော် ” ဆို ပြီး သူမ ရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ချစ် ပရိသတ်တွေ အတွက် မော်ဒယ်လုလုအောင် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ရပါ တယ်…။
ေမာ္ဒယ္ လုလုေအာင္ ဟာ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အခ်စ္ေတာ္ေလး လို႔ ေျပာရတဲ့ သူမ ကေတာ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြ ကို လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ တင္ေပး ေလ့ရွိပါ တယ္..။ သူမ ကေတာ့ ယခု မွာ ပုရိသ ေတြ အသည္းယား ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိလြန္း တဲ့ အလွတ ရား နဲ႔ အထာက်က် ေလး ဓာတ္ဖမ္း ေနခဲ့ ပါ တယ္..။ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ဖက္ရွင္ေလး နဲ႔ ခ်စ္စရာ ေကာင္းလြန္း တဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ဟာ လြမ္းေနတဲ့ ပရိသတ္ ေတြ ကို အခ်စ္ေတြ ပိုေစခဲ့ တာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။
ေအာင္ျမင္ တဲ့ ေမာ္ဒယ္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အႏုပညာ ေလာက မွာ ရပ္တည္ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္ လုလုေအာင္ ကေတာ့ ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ ခ်စ္ခင္ အားေပးမႈ ကို အခိုင္အမာ ရယူထား နိုင္ ခဲ့တဲ့ ေမာ္ဒယ္ တစ္ေယာက္ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္း အလွ တရား ကို ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ ထားနိုင္ ခဲ့တဲ့ သူမ ကေတာ့ အမိုက္စား ဖက္ရွင္ေလး ေတြ အလန္းစား ဖက္ရွင္ေလး ေတြ ကို ဝတ္ဆင္ ေလ့ရွိၿပီး ျပည္သူခ်စ္ အႏု ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ဆို ရင္လည္း မမွားပါ ဘူး..။
သူမ ကေတာ့ ” ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားရင္… ေက်နပ္မွာ ဘဲ ျပည့္စုံ ခန႔္ညားတဲ့ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး နဲ႔ လက္ထပ္ ခြင့္ ရရင္ အရမ္းေပ်ာ္ရႊင္ မွာဘဲ…. အဲဒီလိုတာ ျဖစ္မယ္ဆို ကိုးရီးယား က ဆူဆိုက္ လုပ္တာနဲ႔ ကြာရွင္းမူ အမ်ားဆုံး ဘာလို႔ ျဖစ္မလဲ ေနာ္ ” ဆို ၿပီး သူမ ရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္မွာ ေရးသားထားခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ခ်စ္ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ေမာ္ဒယ္လုလုေအာင္ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြ ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ရပါ တယ္…။
Previous post အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး ညှို့အားပြင်း လွန်းနေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
Next post ရင်ဖိုဖွယ်ကောက်ကြောင်းလေးတွေနဲ့ ဆက်ဆီကျနေတဲ့ သံစဉ်မောင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး